DHAGEYSO: Qorshaha Kenya ugu qarsoon codsiga ku aadan in la hakiyo dhageysiga kiiska badda +(XOG LA HELAY) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Qorshaha Kenya ugu qarsoon codsiga ku aadan in la hakiyo dhageysiga...
DHAGEYSO: Qorshaha Kenya ugu qarsoon codsiga ku aadan in la hakiyo dhageysiga kiiska badda +(XOG LA HELAY)
Bidix, Madaxweyne Farmaajo, Middig Uhuru Kenyatta / Sawir Hore
Nairobi (Halqaran.com) – Warbaahinta dalka Kenya ayaa qoray in dawladda dalkani ay ka codsatay maxkamadda caalimiga ah ee cadaaladda in ay dib u dhigto dhageysiga dacwadda badda ee ay Soomaaliya ay xareysay.
Dawladda Kenya ayaa sheegtay in u baahan tahay in qareeno difaaca oo cusub ay qorato, sidaas darteedna ay waqti dheeri ah u baahan tahay.
Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa diiday codsiga dib u dhigista ee Kenya ay gudbisay.
Cabdiqafaar Cabdi Wardhere oo xiriirka caalamiga ah ku takhasusay, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka ayaa laanta Af Soomaaliga ee VOA-da ka warreysatay, waxay ka dhigan tahay dalabka Kenya iyo qorshaha ku daahsoon.
codsiga maxkamadda ICJ
hakinta dacwadda badda